Warshadda Maska Maska | Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka ee Shiinaha, Soo-saareyaasha
3 Ku Waree Maska Wajiga Mashiinka Dhegaha
Maaskaro wajiga lagu tuuri karo oo ah maareyn waji la'aan ah, oo la awoodi karo si loo yareeyo maaskaro dabeysha ah inta lagu guda jiro faafitaanka 'Convid-19', oo loo sameeyay xirashada boodhka iyo joojinta fiditaanka viruska, waxaa kaliya loo isticmaali karaa jawiga aan caafimaadka aheyn ama jawiga aan nadiifka aheyn. , oo ku habboon shaqaalaha wax soo saarka warshad, booska xafiiska, dukaanka banaanka, gaadiidka dadweynaha, ilaalinta maalinlaha eeyaha, boodhka ka hortagga iyo ka hortagga walxaha. Sifeynta Sharaxaadda Alaabta Dharka Nadiifka leh ee Neefsashada Dharka aan La Bixin
Maaskaro Kn95 waxaa lagu hoos galiyay heerka caadiga ah ee Shiinaha 2626-2006, kaas oo la caddeeyay inuu yahay isku filtar fililil ah sida N95 iyo FFP2 kaydiyaasha. Isticmaal maaskaro Kn95 waa xal kale oo weyn oo loogu talagalay dadka caadiga ah si ay u ilaashadaan naftooda iyo qoysaskooda markii ay bannaanka u baxayaan, oo ay joogaan dadweynaha. Qaab-dhismeedka naqshadaha koobku wuxuu ka dhigayaa maaskaro la adeegsan karo nooca loo yaqaan '9595 mask 'ayaa leh waxqabad wajiyaal ah oo ka fiican wajiga caadiga ah ee wejiga caafimaadka. Qiimaha maaskaro ee Kn95, waxay noqon doontaa mid aad qaali u ah tan maaskaro la iska tuuri karo, sinc ...